एसईईको परिक्षाफल प्रकाशन भएपछि पहिलोपटक मिडियामा
काठमाडौं । एसइई परीक्षाको परीक्षाफल हिजो सार्वजनिक भएको छ । यो बर्ष नेपालकी चर्चित अभिनेत्री करीश्मा मानन्धरले पनि एसइइ परीक्षा दिएकी थिईन् । करिश्मा मानन्धरले परीक्षामा कस्तो नतिजा ल्याउँछिन् भन्ने चासोको विषय थियो ।
अभिनेत्री करीश्मा माननन्धर ३ जीपीए ल्याएर बी प्लस ग्रेडमा उत्तीर्ण भएकी छन् । अभिनेत्री मानन्धरले एसईईको तयारीका लागि विद्यालयमा भर्ना भएर नियमित कक्षा समेत लिएकी थिइन् ।
उनी त्रिवेणी पब्लिक बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा भर्ना भएकी थिइन् । त्यसै विद्यालयबाट उनले एसईईको तयारी गरेकी थिइन् । उनले एसईईको परिक्षाफल प्रकाशन भएपछि पहिलोपटक मिडियामा आएकी छन् । साथै उनले भिडियो कुराकानीमा उनले आफूले एसईई परिक्षा उर्तिर्ण गर्दाको खुशी साथै भविष्यमा आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिने बताइन् ।
उनले प्लस टुमा के विषय लिएर पढ्ने साथै कहाँ पढ्ने समेत खुलाइन् भने मिडिया मार्फत नै नयाँ पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई माथि आक्रोश पोखेकी छन् । हेर्नुहोस् किन र के भनिन् करिश्माले अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई …
Author azonlinePosted on June 29, 2019 June 29, 2019 Leaveacomment on एसईईको परिक्षाफल प्रकाशन भएपछि पहिलोपटक मिडियामा
बिहानको समय भनेको दिनको सबैभन्दा सुरु र महत्वपुर्ण समय
काठमाण्डौ । भनिन्छ ” बिहानले दिनभरीको संकेत गर्दछ । बिहानको समय भनेको दिनको सबैभन्दा सुरु र महत्वपुर्ण समय हो । बिहान सबेरै यस्ता काम गर्नाले घरमा लक्ष्मीको साथमा अन्य सबै देवीदेवताहरुको कृपा पाइन्छ ः
– बिहानबिहानै हत्केला हेर्नुहोस : बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो हत्केला हेर्नुहोस । मान्यता यो छ कि यो काम गर्नाले महालक्ष्मी, सरस्वतीको साथमा भगवान् विष्णुको कृपा समेत मिल्छ ।
– सुर्यलाई जल चढाउनुहोस् : सधैं बिहान सुर्यलाई जल चढाउन पर्छ । यस उपायबाट घरपरिवार र समाजमा मान सम्मान पाइन्छ र सुर्य सँग सम्बन्धित दोष छ भने त्यसबाट पनि मुक्ति पाइन्छ
– मन्दिर सफा राख्नुहोस : घरको मन्दिरमा मुर्ति र पुजाको सामान सही ढंगले सजाएको हुनपर्छ । यसबाट देवीदेवता प्रशन्न हुन्छन् र कुन्डलीको दोष पनि शान्त हुनसक्छ ।
– बिहानै भुमिलाई प्रणाम गर्नुहोस : बिहान पलङबाट खुट्टा भुँईमा राख्नभन्दा पहिले भुमिलाई प्रणाम गर्न पर्छ । साथमा क्षमा पनि माग्नुपर्छ किनभने धर्तीमा खुट्टा राख्नाले हामीलाई दोष लाग्छ
Author azonlinePosted on June 29, 2019 June 29, 2019 Leaveacomment on बिहानको समय भनेको दिनको सबैभन्दा सुरु र महत्वपुर्ण समय
भिटेनले पनि मागे बाबुसँग माफी
काठमाडौँ । अनमोल गुरुङले निर्देशनमा डेब्यू गरेको नेपाली चलचित्र ‘आप्पा’ आजबाट अल नेपाल रिलिज भएको छ । यस चलचित्रको भव्य प्रिमियर हिजो अर्थात बिहबार गरिएको हो । हात्तिसारस्थित जय नेपाल हलमा आयोजना गरिएको प्रिमियर शोमा थुप्रै कलाकर्मी उपस्थित थिए ।
फिल्मको प्रिमियरमा अभिनेता दयाहांग राई छोरा र श्रीमती सहित उपस्थित थिए भने मिस नेपाल २०१९ श्रृङ्खला खतिवडा साथै टिकटककी भाइरल सानी नानी समेत पुगेका थिए।
यस चलचित्रको कथासमेत निर्देशक गुरुङ आफैले लेखेका हुन्। चलचित्रमा रुदेन सादाले लगानी गरेका छन् भने चलचित्रको कार्यकारी निर्माता माबो चेम्जोङ्ग रहेका छन्।
चलचित्रमा दयाहाङ राई, सिद्धान्त राज तामाङ, तुलसी घिमिरेलगायतका कलाकारहरु प्रमुख भुमिकामा रहेका छन्। शैलेन्द्र डी कार्कीले छायांकन गरेको यस चलचित्रलाई निमेष श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन्। चलचित्र अ माउन्टेन स्टोरिज प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको हो।
Author azonlinePosted on June 29, 2019 June 29, 2019 Leaveacomment on भिटेनले पनि मागे बाबुसँग माफी